I-NAB NY 2019: I-TVU Networks 'Cloud-based TVU Talkshow kanye ne-AI-based TVU MediaMind Open Doors for More Broadenedated and ngempumelelo I-Production Video - I-NAB Show News ngu-Broadcast Beat, Umsakazi Osemthethweni We-NAB Show - NAB Show LIVE
Ikhaya » Izindaba » I-NAB NY 2019: I-TVU Networks 'Cloud-based TVU Talkshow ne-AI-based-TVU MediaMind Open Doors Yokukhiqizwa Okuningi Kwamavidiyo nokusebenzayo
UMBONO WE-MOUNTAIN, CALIFORNIA - OCTOBER 4, 2019 - Ku-NAB (National Association of Broadcasters) walo nyaka bonisa i-NY, I-TVU Izinethiwekhi, umholi wemakethe nobuchwepheshe kuzixazululo zevidiyo ezibukhoma ezenzelwe i-IP, uzobe wethula uhlobo lwayo olusha lwe-TVU Talkshow, isisombululo sokuqala sokukhiqizwa kwemicimbi ebukhoma evumela ukubamba iqhaza kwezithameli bukhoma ngevidiyo. I-TVU Izinethiwekhi izokhombisa iTVU Talkshow eceleni kwesisombululo sayo sokugeleza komsebenzi esihlanganisiwe, esisebenzayo, esisebenza izindaba, i-TVU MediaMind. Le nkampani futhi izonikezela ngephakheji yezixazululo ezingabizi kakhulu ezenzelwe abasebenza ngokuzimela; iphakheji lizovula umnyango ovulekile wamakhasimende we-TVN's 3,000 + global. Ababekhona kwi-NAB NY bazokwazi ukufunda okuningi ekusethweni kwe-TVU eBooth N744.
I-TVU izokwenzela umbukiso ohlukile wesisombululo sayo se-TVU Talkshow phakathi kwendlu yayo nendawo eyi-studio ekude. Izivakashi zizokwazi ukuzwa i-TVU Talkshow ebekwe kuqala ebhukwini le-TVU. I-TVU Talkshow ithatha ukuzibandakanya kwezilaleli ukuya ezingeni elilandelayo ngokuvumela abantu ukuthi bahlanganyele emicimbini ebukhoma noma imibukiso ephethwe ngokubiza ngokusebenzisa uhlelo lokusebenza leselula le-TVU Talkshow. Uhlelo lokuphathwa kokushayela ucingo oluhlanganisiwe lusiza abakhiqizi pre-screen noma yiliphi inani labashayeli, futhi ukusekelwa kwe-IFB kunika amandla ukuxhumana phakathi kwabagcini nabashayayo kanye neqembu lokukhiqiza nabaqhubi bekhamera. Ngokwengeziwe, i-TVU Talkshow isekwe ngokuphelele efwini, okwenza ukusetha nokusebenza kube lula kakhulu. Isixazululo singalawulwa ngesikhombimsebenzisi esisebenziseka kuwebhu esisebenziseka kalula. I-TVU Talkshow ingahambisa ividiyo ezindaweni eziningi, kufaka phakathi ama-CDNs, amapulatifomu ezokuxhumana nabantu, amakhasi e-web kanye neziteshi ze-TV ezinikwe amandla iGridi, ngokuchofoza okukodwa; iyakwazi nokukhipha okungokwendabuko kwe-SDI ngesitholi se-TVU.
Joyina i-TVU Talkshow e-NAB NY 2019 ingukuhamba kwenkampani okuhlanganisiwe, okuzenzakalelayo, okuphathelene nokusebenza okusekelwe ku-AI, i-TVU MediaMind. Isebenzisa i-AI ukumaka imithombo yemidiya ngemethadatha njengoba isuka esigabeni sokutholwa iyosatshalaliswa, i-TVU MediaMind ivumela abasakazi ukuthi bahlele kangcono futhi balandelele okuqukethwe kwabo bezindaba, ekugcineni bakwenze ukuthi bakhiqize okuqukethwe amapulatifomu amaningi, kufaka phakathi ukusakazwa kwendabuko nabezindaba zenhlalo. Ngesixazululo sokuhamba komsebenzi, abasakazi bangonga isikhathi, bakhuphule umkhiqizo futhi benze ngezifiso - futhi ekugcineni benze imali engcono - izinto zabo ezingavuthiwe zevidiyo.
"Sijabule kakhulu ukuletha izisombululo zethu ezisekelwa amafu kanye ne-AI etafuleni kule NAB NY yalo nyaka," kusho uMathe Keiler, iPhini likaMongameli, Ukuthengiswa Kwe-Akhawunti Emqoka kwa I-TVU Izinethiwekhi. “Izisombululo ezifana ne-TVU MediaMind neTVU Talkshow zenzelwe ukwenza umsebenzi wabantu ube lula futhi usebenze kakhudlwana, hhayi lokho kuphela - zenzelwe futhi ukuthatha amandla wevidiyo ebukhoma azise ezingeni elilandelayo. I-TVU MediaMind ivumela ukukhiqizwa okusheshayo, okwenziwe ngendlela ethandwa kakhulu kunangaphambili. I-TVU Talkshow ivumela ababukeli ukuthi bahlanganyele emicimbini abayithandayo nakwimibukiso ngesikhathi sangempela, ngaphandle komthungo nangokuzimisela. ”
Ngaphezu kweTVU Talkshow neTVU MediaMind, iTVU izophinde ibonise nomsukeli wayo othola umklomelo we-video ye-HEVC bukhoma, iTVU One, enikwe ubuchwepheshe bokuhambisa ubunikazi obunobunikazi Inverse Statmux Plus (IS +).
I-TVU Izinethiwekhi abasebenzi bazobe bekhona e-booth N744 ukuxoxa ngezisombululo ezigcwele zenkampani.
Mayelana I-TVU Izinethiwekhi®
I-TVU Izinethiwekhi inamakhasimende angaphezu kwe-3,000 emhlabeni jikelele. The I-TVU Izinethiwekhi umndeni wezokudluliswa kwe-IP kanye nezixazululo zokukhiqiza eziphilayo zihlinzeka ngemisakazo nezinhlangano amandla okusebenza okuthembekile nokwethenjelwa ukusabalalisa okuqukethwe kwevidiyo ebukhoma ekusakazeni, amapulatifomu e-intanethi neselula. I-TVU iyingxenye ebalulekile ekusebenzeni kwezinkampani eziningi ezinkulu zezindaba. I I-TVU Izinethiwekhi I-suite yezixazululo isetshenziselwe ukuthola, ukuthumela, ukukhiqiza, ukuphatha nokusabalalisa i-IP ebukhoma be-IP ephilayo HD imidwebo njengengxenye ebalulekile yezindaba, ezemidlalo nezenzakalo ezinkulu zomhlaba wonke. Ukuze uthole olunye ulwazi mayelana I-TVU Izinethiwekhi izixazululo, sicela uvakashele Www.tvunetworks.com.
Injini yokusakaza Ukusakaza Ubuchwepheshe I-Cobalt Encoder I-Graham Chapman i-Prmoted to Editor ip i-isovideo, i-viarte, i-HDR, ukunciphisa komsindo, i-HDR / i-WCG, i-HEVC / AVC, i-HEVC, i-JCT-VC, i-2015, i-bitrate ukunciphisa, immersive, i-UHD / i-4K / i-HD, i-H264 / i-H265, i-Warsaw ukukhiqiza bukhoma I-NAB eNew York SJGolden - Ama-spears nama-Arrows Ubuchwepheshe be-TV tvu I-TVU Izinethiwekhi I-Ultra HD Forum Umlingisi wevidiyo	2019-10-09
Ngaphambilini: I-NAB Khombisa iNew York: I-FOR-A yokugqamisa Okamuva Ekukhiqizeni Okubukhoma
Olandelayo: USony udedela i-Next Generation ye-UWP-D aziwa nge-Wireless Microphone Series ehambisana ne-NFC SYNC